Miatrika Fandrahonana Ara-pitsarana Vaovao Ireo Bilaogeran’ny Zone9 Fanta-daza Raha Vao Mainka Miharatsy Ny Herisetra Ao Ethiopia · Global Voices teny Malagasy
Miatrika Fandrahonana Ara-pitsarana Vaovao Ireo Bilaogeran'ny Zone9 Fanta-daza Raha Vao Mainka Miharatsy Ny Herisetra Ao Ethiopia
Voadika ny 07 Oktobra 2016 9:59 GMT
Mpianatra misaona ao amin'ny Oniversiten'i Haromaya . Sary nozaraina betsaka tao amin'ny media sosialy.
Nosamborina tamin'ny Zoma i Seyoum Teshome, mpikambana fanta-daza ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny mpanoratra an-tserasera ethiopiana enjehina. Notazonina ao amin'ny fonjan'ny tanàna Weliso izy ary voalaza fa nentina tany amin'ny fitsarana tamin'ny Talata, ary mbola naverina any amin'ny polisy indray miandry fanadihadiana bebe kokoa mandritra ny 10 andro araka ny tatitra.
Nitranga izany taorian'ny fampakarana ny raharaham-pitsarana malazan'ny bilaogera Zone9. Mpikambana ao amin'ny bilaogy iraisana iray ao Addis Abeba, ary mpandray anjara ao amin'ny Global Voices ny enina amin'izy ireo, izay nampidirina am-ponja nandritra ny herintaona mahery noho ny fiampangana azy ho manao asa fampihorohoroana . Na dia navotsotra aza izy ireo (nozaraina ekipa roa) tamin'ny volana Jolay sy Oktobra 2015, tsy ho ela indray dia hiatrika fitsarana rehefa nampakatra ny raharaha naha-afaka madiodio azy ireo ny fampanoavana. Miverina any amin'ny fitsarana izy ireo amin'ny 21 Oktobra 2016 ho avy izao.
Herinandro vitsy talohan'ny nisamborana azy, namoaka taratasy misokatra ho an'ny praiminisitra Ethiopiana Desalegn Hailemariam tao amin'ny sehatra an-tserasera EthioThinkTank i Seyoum Teshome. Hoy izy nanoratra :
Mpampianatra ao amin'ny Oniverisiten'i Ambo aho. Manoratra santionam-panadihadihana amin'ny lohahevitra isan-karazany rehefa manam-potoana malalaka. Sivy volana lasa izay, rehefa nanomboka nanoratra aho, dia nanoratra mikasika ny hetsi-panoherana goavana izay efa hitako tao amin'ny tanàna misy ahy, Weliso. Nanomboka teo, efa namoaka lahatsoratra mihoatra ny dimampolo tao amin'ny tranonkala aho. Manoratra izany aho satria tiako ny vahoaka sy ny governemanta hahafantatra fa ny tanjon'ny soratro dia ny mba hampahafantarana vaovao amin'ireo vahoaka sy hanome ny vahaolana soso-kevitra. Te hampahafantatra ny olona rehetra ihany koa aho ny antony nahatonga ahy hanomboka hanoratra.
Nanoratra betsaka momba ny hetsi-panoherana mitohy ao Ethiopia any amin'ny faritra Oromo i Seyoum. Nanoratra sy naneho hevitra izy tao amin'ny sehatra an-tserasera anisan'izany ny tranonkala mpomba ny fitondrana toy ny Horn Affairs, ka nahazo lohatenim-baovao tao amin'ny firenena rehefa niantsafa momba ny hetsi-panoherana Oromo tamin'ny mpanangom-baovaon'i New York Times. Navoaka tamin'ny lohateny manaitra hoe : ‘A Generation is Protesting’ in Ethiopia, Long a U.S. Ally (Taranaka iray Manao Hetsi-panoherana ao Ethiopia, Mpiara-dia amin'i Etazonia hatry ny ela) ny tantara nanehoany hevitra.
Nitranga tao anatin'ny fotoanan'ny hetsi-panoherana mitohy any amin'ny faritra Oromo ny fisamborana an'i Seyoum sy ny fanavaozana indray ny raharaha fanenjehana ireo bilaogeran'ny Zone9. Nitranga tsy tapaka isa-potoana tao Oromia ny fihetsiketsehana nanomboka tamin'ny Novambra 2015, mitaky fizakan-tena bebe kokoa, fahalalahana sy fanajana ny foko Oromo, izay efa niaina fanilikilihana mitohy sy fanenjehana nandritra ny 25 taona farany. Tsy vao indray mandeha ireo manampahefana no nampiasa herisetra mahafaty hamelezana ny mpanao fihetsiketsehana. Tamin'ny 2 Oktobra fotsiny izao dia olona 52 no maty [mg]. Nitatitra ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona 7 kilo izay iray amin'ireo any ampielezana vitsy manaraka ny raharaha fa efa tafakatra 600 ny isan'ny olona maty .
Nandritra ny taona maro izay, Ethiopiana maro nanoratra tamin'ny sehatra an-tserasera no nosamborina, nenjehin'ny fitsarana, na noterena handeha an-tsesitany. Nosamborina sy noenjehina noho ny fiampangana azy ho nanao asa fampihorohoroana tamin'ny Desambra 2015 i Getachew Shiferaw, izay nanomboka ny asa fanaovan-gazetiny tamin'ny alalan'ny fanoratana tao amin'ny sehatra an-tserasera . Meloka tamin'ny asa fampihorohoroana i Zelalem Workagegnhu ary manefa ny saziny an-tranomaizina mandritra ny fotoana maharitra izy ankehitriny. Lasibatra toy izany ihany koa i Eskinder Nega ary nanamarika ny fahadimy taonan'ny sazy 18-taona an-tranomaizina ny volana Septambra lasa teo..
12 ora izayAfrika Mainty